भागरथीकी आमा भन्छिन् – दिनेशले मा'रे'को वि'श्‍वा'सै छै'न (भिडियोसहित) » बुद्ध भूमि नेपाल
बैतडी । बैतडी प्र’ह’रीले बुधबार भागरथी भट्टको ह’त्या’मा सं’ल’ग्‍न भएको भन्दै १७ वर्षीय किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ । तर, भागरथीकी आमा द्रौपदी भट्टले भने प’क्रा’उ ग’रे’र सार्वजनिक गरिएका किशोर ह’त्या’मा सं’ल’ग्‍न भएको भन्‍ने कुरामा आफू वि’श्‍व’स्त नभएको बताएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदसहितको टोलीसँगको भेटमा उनले ह’त्या’रा’का रुपमा बैतडी प्र’ह’री’ले सार्वजनिक गरेका किशोर दिनेश भट्टले छोरी भागरथीको ह’त्या भएको प्र’ह’री’को दा’बी’मा आफू वि’श्व’स्त नभएको बताएकी हुन् ।
लेखाजोखालाई प्राप्त भिडियो क्लिपमा आमा द्रोपदीले अभियुक्त दा’बी गरिएका किशोरलाई देखाएर प्र’ह’री’ले ह’त्या’रा लु’का’उ’ने प्र’या’स गरेको अ’भि’व्य’क्ति दिएकी छन् ।
“घटना भएको दिन उ (दिनेश) चार बजे घाम छँदै घर आएको हो । उसलाई मैले मेरी छोरी आइनन् भनेर सोधेकी हुँ, उसले देखेन भन्यो । आज उ नदेखेको मान्छे मैले गरेको हुँ भन्दैछ । उ त भागरथीको भाइ हो, मेरो छोरो पर्छ । बाजे–बाजे भाइ हुन् । छोरी जेठी हो, उ (किशोर) कान्छो हो । उभन्दा छोरी ठूली थिइ । ए’क्लै’ले कसरी मा’र्‍यो भागरथीलाई ? मैले ध’के’ले’र मा’रे’को हुँ भनिरहेको छ रे,” भागरथीकी आमा द्रोपतीले भनेकी छन् ।
उनले प्र’ह’री’ले ह’त्या’मा सं’ल’ग्‍न रहेको दा’बी ग’र्दै पत्रकार सम्मेलन ग’रे’र सार्वजनिक गरेका किशोर दिनेश भट्ट ए’क्लै’ले भागरथीको ह’त्या’नै गरेको भए उनलाई पनि मा’र्नु’प’र्ने समेत माग गरेकी छन् । “कि त त्यस (किशोर) ले मैले एक्लै मा’रे’को भन्छ भने त्यसको पनि ह’त्या गर्नुपर्छ,” भागरथीकी आमाले भिडियोमा भनेकी छन् ।
प्र’ह’री’ले सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन ग’रे’र ह’त्या’मा सं’ल’ग्‍न भएको दा’बी ग’र्दै दिनेशलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेता साउदसहितका कांग्रेस नेताहरु भागरथीको घर दोगडाकेदारको चडेपानी पुगेका थिए ।
उक्त टोलीमा संविधान सभा सदस्य बहादुरसिंह थापा, नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल महिला संघकी कोषाध्याक्ष जानकी सिंहलगायत नेता–कार्यकर्ताहरु थिए । महिला संघकी कोषाध्यक्ष सिंहले पनि भागरथीकी आमा प्र’ह’री’ले सार्वजनिक गरेको किशोरले छोरीको ह’त्या गरेको दा’बी’मा वि’श्व’स्त नदेखिएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
“त्यो केटा र भागरथी दिदी भाइ हुन् । त्यसले त्यस्तो गरे होला भन्ने मलाई कत्ति पनि वि’श्वा’स छै’न । हि’जो’स’म्म सामूहिक ब’ला’त्का’र भन्‍ने, आज आएर त्यो सानो बच्चाले गरेको हो भन्‍ने ? यो ह’त्या’रा लुकाउने खेल हो,” उनले द्रोपतीको भनाइ उ’द्धृ’त ग’र्दै लेखाजोखासँग भनिन् ।
कोषाध्यक्ष सिंहका अनुसार द्रोपतीले छोरी भागरथीले न्या’य न’पा’उँ’दा’स’म्म श’व न’बु’झ्ने पनि बताएकी छन् । “जहिले स’म्म मेरो छोरीले न्या’य पाउँदिन । त’ब’स’म्म म श’व पनि बुझ्दैन । अब मेरी छोरीले न्या’य पाउँदिन भन्नेमा म ढु’क्क छु । न्या’य नपाएपछि मैले बा’च्नु’को अर्थ छै’न । म पुलिस चौकी अ’गा’डि ग’ए’र म’र्दि’न्छु,” उनले द्रोपतीको भनाइ उ’द्धृ’त ग’र्दै भनिन् ।